Olee otú anyị ga-esi 'mee ka ìhè anyị na-enwu'? | Ilblogdellafede
Olee otú anyị ga-esi mee ‘ka ìhè anyị na-enwu’?
Ekwuwo na mgbe ndị mmadụ juputara na Mmụọ Nsọ, nwee mmekọrịta na-aga nke ọma ha na Chineke, ma ọ bụ na-anwa ịgbaso ihe nlereanya Jizọs Kraịst kwa ụbọchị, ha na-enwu dị egwu. Enwere ihe dị iche na usoro ha, omume ha, ọrụ ndị ọzọ na njikwa nsogbu.
Kedu ka "nchapu" ma ọ bụ ọdịiche a si agbanwe anyị na gịnị ka anyị kwesịrị ime banyere ya? Akwụkwọ Nsọ nwere ọtụtụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ iji kọwaa etu ndị mmadụ si agbanwe n'ime ya mgbe ha ghọrọ Ndị Kraịst, mana amaokwu a, ekwuputara site n'egbugbere ọnụ Jizọs n'onwe ya, yiri ka ọ gụnyere ihe anyị kwesịrị ime na mgbanwe a dị n'ime.
Na Matiu 5:16, amaokwu a kwuru, sị: "Meenụ ka ìhè unu na-enwu n'ebe ndị mmadụ nọ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu wee nye Nna unu bi n'eluigwe otuto."
Ọ bụ ezie na amaokwu a nwere ike ịda ụda, ọ na-akọwapụta onwe ya. Ya mere ka anyị tọpụ amaokwu a ọzọ wee hụ ihe Jizọs gwara anyị mee, na mgbanwe ndị ga-eme gburugburu anyị mgbe anyị hapụrụ ka ọkụ anyị nwuo.
Gịnị ka “Meenụ Ìhè Gị” pụtara?
Ìhè ahụ, nke e kwuru okwu ya ná mmalite nke Matiu 5:16, bụ nchapụta ime ahụ nke anyị tụlere ná mkpirikpi ná mmalite. Ọ bụ mgbanwe ahụ dị mma n’ime gị; afọ ojuju ahụ; izu ike dị n'ime ahụ (ọbụlagodi mgbe ọgba aghara gbara gị gburugburu) nke ị na-enweghị ike iji aghụghọ ma ọ bụ nchefu echefu.
Ìhè bụ nghọta gị na Chineke bụ Nna gị, Jizọs bụ Onye Nzọpụta gị, a na-ebugharịkwa ụzọ gị site na itinye ịhụnanya nke Mmụọ Nsọ. Ọ bụ ịmara na ihe ị bụ tupu ị mata Jizọs n'onwe gị ma nakwere àjà ya enweghị ihe jikọrọ ya na onye ị bụ ugbu a. Treat na-emeso onwe gị na ndị ọzọ mma, ka ị na-aghọtakwu na Chineke hụrụ gị n’anya na ọ ga-egbo mkpa gị niile.
Nghọta a pụtara ìhè nye anyị dịka "ìhè" dị n'ime gị, dịka ìhè nke ekele na Jizọs azọpụtala gị yana ị nwere olile anya na Chineke ihu ọ bụla ụbọchị ahụ ga-eweta. Nsogbu ndi dicha ka ugwu puru iche dikwa ka ugwu ndi emerie emeri mgbe imara na Chineke n’edu unu. Yabụ mgbe ị hapụrụ ka ìhè gị nwuo, ọ bụ nghọta doro anya a banyere onye Atọ n'Ime Otu bụụrụ gị nke pụtara ìhè n'okwu, omume na echiche gị.
Onye Jizọs na-agwa okwu ebe a?
Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya kesara nghọta a dị ịtụnanya edere na Matiu 5, nke gụnyekwara isi ọma asatọ ahụ. Mkparịta ụka a ya na ndị na-eso ụzọ ya bịara mgbe Jizọs gwọchara igwe mmadụ na Galili niile wee nọrọ jụụ n ’igwe mmadụ ahụ n’elu ugwu.
Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ndị niile kwere ekwe bụ “nnu na ìhè nke ụwa” (Matiu 5: 13-14) na ha dịkwa ka “obodo n’elu ugwu a na-apụghị ịzo ezo” (Matiu 5:14). Ọ gara n’ihu n’amaokwu a site n’ikwu na ndị kwere ekwe ga-adị ka oriọna oriọna nke na-achọghị ka e zoo ya n’okpuru nkata, kama edobere ya n’elu oche iji nye mmadụ niile ụzọ (Mat. 5:15).
Gịnị ka amaokwu ahụ pụtara nye ndị gere Jizọs ntị?
Amaokwu a so na okwu amamihe dị iche iche nke Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya, ebe ekpughere ya na Matiu 7: 28-29, na ndị na-ege ntị “juru nkuzi ya anya, n’ihi na ọ kuziri ha dịka onye nwere ikike, ọ dịghịkwa ka ndị odeakwụkwọ. "
Jizọs maara ihe na-echere ọ bụghị naanị maka ndị na-eso ụzọ ya kamakwa maka ndị ga-emesịa nabata ya n'ihi àjà ya n'elu obe. Ọ maara na oge nsogbu ga-abịa nakwa na n'oge ndị ahụ, anyị kwesịrị ịmụrụ ọkụ maka ndị ọzọ iji lanarị ma nwee ọganiihu.
N’ụwa jupụtara n’ọchịchịrị, ndị kwere ekwe ga-enwerịrị ọkụ nke na-enwu n’ọchịchịrị iji duru ndị mmadụ ọ bụghị naanị na nzọpụta kamakwa n’aka Jizọs.
Dika Jisos merekorita na Sanhedrin, onye mechara wazo uzo ka ekpogide ya n’obe, ayi ndi kwere ekwe g’agha agha megide uwa nke g’eji wepu ìhè ma obu kwusi na obu okwu ugha na obughi nke Chineke.
Ọkụ anyị bụ ebumnuche anyị nke Chineke hibere na ndụ anyị, akụkụ nke atụmatụ Ya iweta ndị kwere ekwe n’alaeze Ya na mgbe ebighi ebi n’eluigwe. Mgbe anyị nabatara nzube ndị a - oku ndị a n'ime ndụ anyị - wick anyị na-enwu n'ime ma na-enwu n'ime anyị ka ndị ọzọ hụ.
A sụgharịrị amaokwu a n'ụzọ dị iche na nsụgharị ndị ọzọ?
"Mee ka ìhè gị nwuo n'ihu mmadụ ndị pụrụ ịhụ ọrụ ọma gị ma too Nna gị nke bi n'Eluigwe," bụ Matiu 5:16 si na New King James Version, nke bụ otu ahịrịokwu ahụ a pụrụ ịhụ na King James Version nke la Baịbụl.
Transfọdụ nsụgharị nke amaokwu ahụ nwere ụfọdụ ụzọ aghụghọ si na nsụgharị KJV / NKJV, dịka New International Version (NIV) na New American Standard Bible (NASB).
Nsụgharị ndị ọzọ, dịka Akwụkwọ Nsọ e mere ka ọ pụtawanye, akọwapụtakwala "ezi ọrụ" ndị a kpọtụrụ aha n'amaokwu a ka ọ bụrụ "ezi omume na ịkpa ezi agwa" na omume ndị a na-eto Chineke, na-asọpụrụ ya ma na-asọpụrụ ya. Ozi nke Akwụkwọ Nsọ na-akọwapụta nke ọma karịa amaokwu ahụ na ihe ajụrụ anyị, “Ugbu a ka m debechara gị ebe ahụ n’elu ugwu, n’elu ebe na-enwu gbaa - nwuo! Mee ka ụlọ ghere oghe; na-emesapụ aka na ndụ gị. Site na imeghere onwe gị nye ndị ọzọ, ị ga-akpali ndị mmadụ imeghere Chukwu, Nna a nke eluigwe na-emesapụ aka ”.
Agbanyeghị, ntụgharị asụsụ niile na-ekwu otu mmetụta ahụ nke na-enwupụta ìhè site na ọrụ dị mma, yabụ ndị ọzọ hụrụ ma mata ihe Chineke na-esite n'aka gị eme.
Kedu ka anyị ga - esi bụrụ ìhè nye ụwa taa?
Ugbu a karịa mgbe ọ bụla, a kpọrọ anyị ka anyị bụrụ ọkụ maka ụwa nke na-agba mgba megide ikike anụ ahụ na nke mmụọ dịka ọ na-adịtụbeghị mbụ. Karịsịa dịka anyị na-eche nsogbu ugbu a metụtara ahụike anyị, njirimara, ego na ọchịchị, ọnụnọ anyị dị ka ọkụ maka Chineke dị oke mkpa.
Fọdụ kwenyere na oke ọrụ bụ ihe ọ pụtara ịbụ ọkụ nye Ya.Ma oge ụfọdụ ha bụ obere ọrụ okwukwe nke na-egosi ọtụtụ ndị ịhụnanya na ndokwa nke Chineke maka anyị niile.
Fọdụ ụzọ anyị nwere ike isi bụrụ ọkụ nye ụwa taa gụnyere ịgba ndị ọzọ ume n’ime ọnwụnwa ha na ihe isi ike ha site na ekwentị, ozi ederede, ma ọ bụ mmekọrịta ihu na ihu. Wayszọ ndị ọzọ nwere ike ịbụ iji amamihe gị na obodo ma ọ bụ n’ozi ọma, dị ka ịbụ abụ n’abụ, iso ụmụaka na-arụkọ ọrụ, inyere ndị okenye aka, na ikekwe, ị nọ n’elu ikpo okwu ikwusa okwuchukwu. Bụ ìhè pụtara ikwe ka ndị ọzọ jikọọ na ìhè ahụ site na ọrụ na njikọ, na-enye gị ohere ịkọrọ ha otu ị si enwe ọ joyụ nke Jizọs iji nyere gị aka n'oge ọnwụnwa na nsogbu gị.
Ka ị na-enwu n’ìhè gị ka ndị ọzọ wee hụ, ị ​​ga-ahụkwa na ọ ga-agbada ma ọ bụrụ na ị ga-amata ihe ndị i mere na ọtụtụ ụzọ ị ga-esi nye Chineke otuto ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka Ya, ị gaghị anọ n’ebe ị nwere ike. nwue site n’ìhè ma jeere ndị ọzọ ozi n’ihunanya Ya .N’ihi ụdị onye Ọ bụ, ị ghọwo onye na-eso ụzọ Kraịst ị bụ.
Mee ka ìhè gị nwuo
Matthew 5: 16 bụ amaokwu nke nwere ekele ma hụ n'anya ruo ọtụtụ afọ, na-akọwa onye anyị bụ n'ime Kraịst na otu ihe anyị si emere Ya na-eweta otuto na ịhụnanya nye Chineke bụ Nna anyị.
Ka Jizọs na-eso ndị na-eso ụzọ Ya ekerịta eziokwu ndị a, ha hụrụ na Ọ dị iche na ndị ọzọ na-ekwusa maka otuto nke ha. Ìhè ya nke na-enwu enwula enyela ndị mmadụ laghachikwute Chineke Nna na ihe niile bụ maka anyị.
Anyị na-enwete otu ọkụ ahụ mgbe anyị na ndị ọzọ kerịta ịhụnanya Chineke dịka Jisọs mere, jiri obi udo na-ejere ha ozi ma na-eduru ha gaa na ndokwa na ebere nke Chineke. ihe ngosi nke olile anya nke ndi mmadu ma nye Chineke otuto n’eluigwe.
← Na post gara aga Gara aga post:Vatican: Baptizim a na-eme "n'aha obodo" adabaghị
Ọzọ Post → Post ozo:Ofufe inye tobọchị nye onye isi nchedo anyị ụbọchị